नेपाली ‘जिन’मा नयाँ कोरोना संक्रमण : RajdhaniDaily.com -
Home बिचार नेपाली ‘जिन’मा नयाँ कोरोना संक्रमण
कोभिड–१९ नेपाली ‘जिन’मा नयाँ स्वरूपमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना बढेर गएको छ । यो नयाँ प्रजातिको भाइरस बेलायतमा देखापरेको तर बेलायती नेपालीमा त्यसको संक्रमण देखिएकाले नेपाल त्यस प्रजातिको भाइरसबाट जोखिममा पर्न गएको छ । बेलायतबाट फर्किएकामध्ये तीन नेपालीमा त्यो नयाँ प्रजातिको कोरोना भाइरस देखापरेपछि नेपाल अब त्यो प्रजातिको भाइरसबाट हुन सक्ने संक्रमणको जोखिममा परेको पुष्टि भएको छ । भाइरसले नयाँ स्वरूप वा संस्करण लिनुको पछाडिको मूल कारण मानिसमा भएको ‘जिन’को विविधताले हो । जिनमा भएको विविधताका आधारमा कोरोनाको नयाँ नयाँ संस्करण हुँदै जाने भएकाले कोरोना एकपछि अर्को गरी विविधतामा देखापर्दै र नयाँ नयाँ तरिकाले आक्रमण गर्दै गइरहेको छ । भनिन्छ, चीनको बुहानबाट फैलनेबित्तिकै यसले आफ्नो नयाँ संस्करण दिन थालिसकेको थियो । अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले ‘विआर ह्वाइट, विआर अमेरिकन, लेट्स किस’ भनिरहँदा कोरोना रात दिन नयाँ नयाँ संस्करण लिँदै फैलिदै गइरहेको थियो । त्यतिबेला विश्व स्वास्थ्य सँगठनले कोरोना पहिलेको अवस्थामा नरहेको र हाइब्रिड हुँदै गइरहेको चेतावनी दिइरहेको थियो । विश्वका जनता सतर्क हुनुपर्ने र शासकहरूको बेलैमा बुद्धि पलाउनुपर्ने भनी सजग गराइरहेको थियो । तर, आँखाले नदेखेर नपत्याउने मानिसको संख्या यो समाजमा कम नभएका कारण पनि कोरोनाबारेमा विश्वभर विभ्रम फैलिइ नै रह्यो ।
आज त्यो बेलायति संस्करण बन्न पुगेको छ र विश्वभर फैलिइरहेको छ । नेपाल पनि यो संस्करणबाट अछुतो छैन । बेलायतबाट फर्किएका विभिन्न उमेर समूहका तीन जना मानिसमा यसको संक्रमण पुष्टि नभए पनि नेपाली ‘जिन’ अब यो कोरोना प्रजातिको आक्रमण र संक्रमणबाट अछुतो नरहेको पुष्टि भइसकेको छ । यसको फैलनेक्रम पनि पहिलेको संस्करणभन्दा तीव्रतामा छ । नेपाल आएका २८ वर्षीया महिला, ६७ र ३२ वर्षीय दुई पुरुषमा नयाँ प्रजातिको कोरोना पुष्टि भएपछि उमेर समूहको दूरी पनि बाँकी रहेन । महिला र पुरुषबीचको हार्मोनको दूरी पनि कायम रहन सकेन । लाइनएज बी–१.१.७ वा २० बी–५०१ वाईभी वान नयाँ भेरियन्ट बढी आक्रामक र संक्रामक रहेकाले यसको रोकथामका उपाय छन् वा छैनन् भनी चिन्ता उत्पन्न गराएको छ । तर, नेपालमा न त त्यस्ता विषय विशेषज्ञको खोजी भएको छ, न त विशेष उपकरणहरूको व्यवस्था नै गरिएको छ । मात्र प्रचारप्रसार भएको छ कि नयाँ प्रजातिको भाइरस नेपाल छिरिसकेको छ । तर, यो प्रजातिको भाइरस भारतमा पनि बाक्लै रूपमा देखापरिसकेको छ ।
बेलायतबाट फर्किएका नेपालीहरूको स्वास्थ्य स्थिति हालसम्म राम्रै रहेकाले नेपालीलाई त्यसले पनि धेरै हानी गर्न सक्दैन कि भन्ने आँकलन हुन थालेको छ । तर, भाइरस भनेको जीव जनावरको दुस्मन नै हो । यो भाइरस कम वा बढी हानिकारक हुन सक्ने र नसक्ने भनेको बेलायती नागरिकलाई हेरे पनि पुग्छ । एउटै मूल बाँदर प्रजातिबाट विभिन्न शाखामा बाँडिएका मानिसहरू को कति सुरक्षित र असुरक्षित हुन सक्लान् ? यो सोचनीय विषय हुन पुगेको छ । भनिन्छ, अहिले भाइरस उसकै नयाँ रणनीतिसहित आउने गरिरहेको छ । त्यसैले, पनि यस विरुद्धमा जुध्न मानिसले पनि आफ्नै रणनीति निर्माण गर्नु जरुरी छ । त्यो भनेको जीवन शैली र जीवनपद्धतिमा सकारात्मक परिवर्तन नै हो ।
प्रदेश ३ नारायण ढुङ्गाना - August 19, 2020
काठमाडौँ । काठमाडौँ उपत्यकामा तपाईँ बिहिबारदेखि मर्निङ वाक या अरु कुनै अत्यावश्यक नभएको काममा निस्कँदै हुनुहुन्छ ? एकै छिन त हो, त्यहीँ पर पुगेर...
Breaking News हुमाकान्त पोखरेल - May 18, 2020